Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Kor -u -qaadista Gaadiidka ee Garoomada Diyaaradaha ee FRAPORT
Airport • Jebinta Wararka Yurub • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Markii ugu horreysay tan iyo markii uu dillaacay cudurka faafa ee coronavirus, Fraport wuxuu mar kale gaadhay natiijo kooxeed togan (macaash saafiga ah) muddada warbixinta - oo ay taageereen baahida sii kordheysa iyo kharashaadka la dhimay, iyo sidoo kale bixinta magdhawga masiibada ee dowladda.
Warbixinta Ku -meelgaarka ah ee Kooxda Fraport - Qeybtii Koowaad 2021:
Qeybtii Koowaad ee 2021 -ka, Gaadiidka ayaa dib u soo laabanaya madaarada FRAPORT/
Lambarada rakaabka oo sii kordhaya inta lagu jiro xilliga safarka xagaaga-Kharashyada ayaa si weyn hoos loogu dhigay-Fraport waxay gaadhay natiijo kooxeed togan iyadoo ay ugu wacan tahay saamaynta hal mar ah
Waxqabadka ganacsi ee shirkadda madaarka caalamiga ah ee Fraport wuxuu sii waday inay saamayn ku yeelato masiibada Covid-19 lixdii bilood ee ugu horreysay sannadka 2021. Ka dib rubuc hore oo daciif ah, tirooyinka taraafikada ayaa mar labaad la helay rubucii labaad ee 2021 dhammaan kooxda madaarada aduunka.
Maamulaha guud ee Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, ayaa yiri: “Magdhowga masiibada ee ka timid dowladaha Jarmalka iyo Gobolka Hesse wuxuu xoojinayaa saldhiggeenna sinnaanta. Tani waxay noo saamaxaysaa inaan sii wadno maalgelintayada ku aaddan ilaalinta cimilada iyo mashaariicda horumarinta kaabayaasha. Isla mar ahaantaana, waxaan si weyn hoos ugu dhignay kharashyadeenna. Sidaa awgeed, natiijada hawlgalkeennu waxay mar kale ku noqotay madow. Sidoo kale waxaan u mahadcelineynaa faylkayaga gegida dayuuradaha ee caalamiga ah ee ballaaran oo kala duwan Fraport Group ayaa si fiican u taagan inay ka faa'iideysato soo kabashada la filayo ee safarka hawada. ”
Gaadiidka rakaabka ayaa si muuqata u soo laabanaya
Bishii Juun 2021, tirooyinka rakaabka ee garoonka Fraport's Frankfurt Airport (FRA) ayaa si aad ah dib ugu soo noqday-oo kor u kacay ku dhowaad 200 boqolkiiba sannad-sannadka ilaa 1.8 milyan oo safar ah. Tirooyin horudhac ah ayaa tilmaamaya in habkan uu sii socday bishii Luulyo, iyadoo taraafikada ay korortay ilaa 116 boqolkiiba ilaa 2.8 milyan oo rakaab ah. Gaadiidka rakaabka ee FRA maalmaha ugu sarreeya ayaa hadda gaaraya ilaa 50 boqolkiiba heerka la diiwaangeliyey intii lagu jiray sannaddii diiwaangelinta ka hor-2019.
Isagoo tixraacaya saamaynta kororka taraafikada iyo kor u kaca howlaha garoonka, maamulaha shirkadda Schulte wuxuu sharraxay: “Kororka aadka u badan ee taraafikada ayaa caqabad ku ah shaqada garoonka diyaaradaha ee Frankfurt, maxaa yeelay gaadiidku aad buu u xoog badan yahay dhowr jeer oo maalintii ah. Intaa waxaa sii dheer, tallaabooyinka anti-Covid ee hadda jira waxay u baahan yihiin waqti iyo kheyraad aad u badan oo loogu talagalay geeddi-socodka terminal iyo hawlgallada dhulka-haynta. Anagoo si dhow ula shaqeyneyna shuraakadayada, waxaan si joogto ah u wanaajineynaa hababka, annagoo la qabsaneyna awooddeena isbeddellada baahida. ”
In kasta oo isbeddel wanaagsan la arkay toddobaadyadii la soo dhaafay, FRA waxay weli diiwaangelisay hoos-u-dhac guud ee taraafikada oo ah 46.6 boqolkiiba sannad-ku-dhawaad ​​6.5 milyan oo rakaab ah muddada Jannaayo-Juun 2021 oo dhan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah, isla muddadii lixda bilood ahayd ee sanadkii hore, masiibada Covid-19 waxay bilaabatay inay saamayn taban oo xooggan ku yeelato taraafikada bartamihii Maarso 2020. Marka la barbardhigo tirooyinka rikoorka ah ee la gaaray qeybtii hore ee cudurka faafa ee 2019, FRA xitaa waxay diiwaangelisay boqolkiiba 80.7 hoos u dhac ku yimid taraafikada qeybtii hore ee 2021. Taas bedelkeeda, soo dhoofinta xamuulka ee Madaarka Frankfurt (airfreight + airmail) ayaa kordhay 27.3 boqolkiiba sanadkii -ku dhawaad ​​1.2 milyan oo metrik ton laga bilaabo Jannaayo ilaa Juun 2021 (ilaa 9.0 boqolkiiba marka la barbardhigo isla muddadaa 2019). Garoomada diyaaradaha ee Fraport's Group, taraafikada ayaa sidoo kale si muuqata u korodhay bishii Juun 2021, laakiin guud ahaan taraafikada qeybtii hore ayaa aad uga hooseysay heerkii sanadkii hore.
Dakhligu wuu yara yaraadaa-Saamayn togan oo hal mar ah oo ka timaadda bixinta magdhawga dawladda
Iyadoo ka tarjumaysa horumarka guud ee taraafikada, Dakhliga Kooxda Fraport wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 10.9 ilaa 810.9 2021 milyan qeybtii hore ee 12. La -qabsiga dakhliga ka soo gala dhismaha ee la xiriira kharashaadka raasamaalka awoodda leh ee kaabayaasha Fraport adduunka oo dhan (oo ku saleysan IFRIC 8.9), Dakhliga kooxdu wuxuu hoos u dhacay 722.8 boqolkiiba ilaa 2020 159.8 milyan. “Dakhliga kale” ee Fraport waxaa si togan u saameeyay heshiiskii dowladaha Jarmalka iyo Gobolka Hesse si ay u siiyaan Fraport magdhow si loo ilaaliyo u diyaargarowga hawlgalka ee FRA inta lagu gudajiray xiritaanka coronavirus ee ugu horreeyay 2021. Qaddarka magdhowga oo dhan € XNUMX milyan wuxuu lahaa saameyn togan oo u dhiganta Kooxda EBITDA. Fraport wuxuu rajaynayaa inuu helo lacag -bixinta qeybtii labaad ee XNUMX. Soo galitaankan lacageed wuxuu markaas saamayn togan ku yeelan doonaa dheelitirka Kooxda iyo deynta maaliyadeed ee saafiga ah.
Sidoo kale baarlamaanka Giriiga ayaa ansixiyay magdhow Fraport (sida waafaqsan heshiiska wax -ka -dhimista) khasaarihii hawl -gal ee ka dhacay 2020 -ka gegida diyaaradaha ee Giriigga ee 14 sabab u ah masiibada. Gaar ahaan, Dawladda Giriiggu waxay oggolaatay inay ka dhaafto khidmadaha dhimista go'an ee Fraport, iyada oo ku saleysan xaddiga taraafikada rakaabka ee la helay. Waxaa intaa dheer, Fraport waxaa la siiyay ka -hakin ku -meel -gaar ah oo ku saabsan bixinta khidmadda wax -ka -beddelka ee is -beddelka ah. Qeybtii hore ee 2021, tan waxaa loo tarjumay saamayn togan oo ah .69.7 XNUMX milyan oo ku aaddan dakhliga kale ee Fraport iyo Kooxda EBITDA.
Intaa waxaa sii dheer, heshiiskii la gaaray rubucii hore ee 2021 oo u dhexeeyay Fraport iyo Booliska Federaalka Jarmalka (Bundespolizei) mushaharka adeegyada amniga duulista - oo ay bixisay Fraport xilli hore - dakhli soo xarooday oo ahaa .57.8 XNUMX milyan, taas oo si togan u saamaysay Kooxda EBITDA isla lacagtaas.
Kharashyada hawlgalka ayaa si weyn hoos loogu dhigay - Natiijadii Kooxda Wanaagsan ayaa la gaadhay
Marka la fiiriyo caddadka taraafikada ee dhowaan soo kordhay, Fraport wuxuu si weyn u yareeyey shaqada waqtiga-gaaban ee shaqaalaha ka hawlgala Madaarka Frankfurt (oo lagu soo bandhigay Jarmalka Shaqada waqtiga-gaaban barnaamijka looga jawaabayo masiibada). Kaabayaashii madaarka si ku -meel -gaar ah oo aan loo isticmaalin masiibada awgeed ayaa si weyn dib loogu soo celiyay shaqadii - oo ay ku jirto Terminalka FRA 2. In kasta oo tallaabooyinkan dhowaan la qaaday, Fraport wuxuu weli awood u lahaa inuu yareeyo kharashaadka guud ee hawlgalka Frankfurt iyada oo loo marayo maareyn kharash oo adag qiyaastii boqolkiiba 18 qeybtii hore ee 2021. Shirkadaha Fraport ee si buuxda isu-urursaday ee adduunka oo dhan, kharashyada hawlgalka ayaa hoos loo dhigay qiyaastii boqolkiiba 17 muddada warbixinta.
Waxaa taageeray saamaynta hal mar ah ee bixinta magdhawga, Kooxda EBITDA waxay gaartay 335.3 22.6 milyan, oo ka badan qeybtii hore ee EBITDA ee sanadkii hore oo ahayd .312.7 2021 milyan by XNUMX milyan. Marka laga reebo saameyntan gaarka ah ee gaarka ah, Kooxda ayaa weli heshay natiijo hawlgal togan qeybtii hore ee XNUMX.
Kooxda EBIT waxay gaartay 116.1 210.2 milyan muddadii warbixinta, halka laga jaray 2020 96.2 milyan qeybtii hore ee 1. Natiijada maaliyadeed ee laga jaray .2020 98.7 milyan ayaa ku dhowaad la heer ahayd isla qeybtii hore ee sanadkii hore (H35/37: laga jaray € XNUMX milyan). In kasta oo natiijada maaliyadeed ay ka faa'iideysatay tabarrucaad togan oo dhan million XNUMX milyan oo ay ka heleen shirkadaha isku-dhafan ee Hantida, haddana tani ma beddeli karto million XNUMX milyan ee kororka kharashaadka dulsaarka oo ka dhashay deymaha maaliyadeed ee kordhay.
Kooxda EBT waxay ku hagaagtay .19.9 2021 milyan qeybtii hore ee 1 (H2020/308.9: laga jaray 15.4 milyan). Natiijada Kooxda ama macaashka saafiga ah ayaa kordhay € 1 milyan (H2020/231.4: laga jaray XNUMX XNUMX milyan).
Iyada oo la soo gabagabeeyay qeybtii hore ee 2021, guddiga fulinta Fraport ayaa weli filaya in taraafikada rakaabka ee Madaarka Frankfurt ay u dhexeeyaan wax ka yar 20 milyan illaa 25 milyan sannadka oo dhan 2021. Iyadoo la raacayo aragtidii hore, Garoomada Kooxda ee caalamiga ah ee Fraport. faylalka tacliimeed ayaa la filayaa inay arkaan ka soo kabashada taraafikada oo aad u firfircoon marka loo eego Frankfurt. Dakhliga kooxda ayaa sidoo kale la filayaa inuu gaaro ku dhawaad ​​billion 2 bilyan sanadka 2021.
Bixinta magdhowga masiibada oo ku dhow million 160 milyan oo ay dhowaan bixiyeen dowladaha Jarmalka iyo Gobolka Hesse laguma darin aragtidii hore. Marka lagu daro saameyntan, guddiga fulinta wuxuu hadda ka filayaa kooxda EBITDA sanadka oo dhan inay u dhexeyso qiyaastii € 460 milyan illaa 610 300 milyan (dib loo eegay inta u dhexeysa € 450 milyan illaa € 2020 milyan, sida lagu saadaaliyay Warbixinta Sannadlaha ah ee Fraport). Magdhowgu wuxuu sidoo kale saamayn togan ku yeelan doonaa Kooxda EBIT, oo markii hore la filayay inay xoogaa taban tahay laakiin hadda la saadaalinayo inay gaarto dhul togan. Horay loo saadaalinayay inay taban tahay, natiijada Kooxda (faa'idada saafiga ah) ayaa hadda la filayaa inay noqoto inta u dhexeysa waxoogaa taban ilaa waxoogaa wanaagsan.